ခွန်ဆိုုုုုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ - ၈ - MoeMaKa Media
Home / Community / Coronavirus / Experience / Khun Sai / UK / ခွန်ဆိုုုုုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ - ၈
ခွန်ဆိုုုုုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ - ၈
Above: Inovio Pharmaceuticals Senior Vice President of Research and Development Kate Broderick speaks with KPBS Health Reporter Tarryn Mento outside the company's Sorrento Valley lab, March 17, 2020.
ကိုရိုနာ ဗိုင်းယပ်စ် ကူးစက် ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို စမ်းသတ်ဖေါ်ထုတ်နေကြတဲ့ အထဲမှာ ဒေါက်တာကိတ် ဘရော့ဒဲရစ် ( Dr Kate Broderick )ဟာ အသက်၄၂ နှစ်ပဲ ရှိသေးတဲ့ စကော့တလန်သူအချောတယောက်ပါ ။ လာမယ့် ဧပြီလထဲကျရင် တော့ သူတို့ တတွေ ကိုဗစ် ၁၉ ကာကွယ်ဆေးကို လူသားတွေနဲ့ စ စမ်းနိုင်တော့မယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့ အကြောင်း မကြာခင်က ထုတ်ပြောပါ တယ် ။ လောလောဆယ် အမေရိကန် နိုင်ငံ စန်တီယာဂို မြို့ က ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ သူ့ အဖွဲ့တွေ နဲ့ အတူ တိရိစ္ဆာန်တွေကို အရင် စမ်းသတ်နေတုန်းပြောပါတယ် ။
ပညာရှင်ဒေါက်တာမကြီးက ခုလိုပြောလိုက် တော့ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးကြီး မကြာခင်ပဲ မြန်မာပြည်ရောက်လာ၊ လူတွေ အလွယ်သုံးနိုင်ကြ ဆိုတဲ့ ကောက်ချက် မျိုး အလွယ်ဆွဲလိုက် ကြမှာ စိုးပါတယ် ။ အဲလိုကောက်ချက်နဲ့ ပေါ့တိပေါ့ဆ အနေ အစား မပျက်လုပ်နေကြမှာစိုးပါတယ်။ သတင်းစာ ဂျာနယ်ကြီးတချို့မှာ လဲ ကာကွယ်ဆေးတွေ့ပြီ ခေါင်းစည်းတွေနဲ့ အလွယ်ရေးနေကြတာတွေ့ပါတယ်။
၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာကစလို့ ကိုရိုနာ အလူးအလဲ စတင် အကိုက် ခံ ရတဲ့ တရုတ်ပြည်ဝူဟန်မြို့ က ဆေးသိပ္ပံ ပညာရှင်တွေဟာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းယပ်စ် Covid 19 ရဲ့ ဗီဇ ဖွဲ့စည်းပုံ ( Genetic Code )ကို အပြင်းအထန် ရှာဖွေခဲ့ကြရတယ် ။ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလထဲမှာတော့ တကမ္ဘာလုံးက ဆေးသိပ္ပွံ ပညာရှင်တွေဆီအရောက် ဖုတ်ပူမီးတိုက် သူတို့တတွေ က ပေး ပို့မျှဝေနိုင် ခဲ့ကြပါတယ်။အမြန်ပေး ပို့ရ တဲ့ အဓိပ္ပါယ်က သူတို့ဆီမှာ မြွေကိုက်နေပြီ ။ သူတို့ကို ကူကြကယ်ကြပါဦးလို့ ပညာရှင်အချင်းချင်း စစ်ကူခေါ်ခဲ့တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ ။ Genetic Code ရပြီးပြီးချင်း ၃နာရီ မပြည့်ခင်မှာ ဒေါက်တာ ကိတ်ဘိုဒဲရစ်က သူတို့ ဖေါ်ထုတ်မယ့် ကာကွယ်ဆေးရဲ့ DNA design ကို ပုံဖေါ်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ ။
ဒီ ကိုရိုနာ ဗိုင်းယပ်စ် ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပြန်ဆော်ရမယ်ဆိုတာ မလုပ်နိုင် ခင် ဒီဂြိုလ်ကောင် ဟာ ဘယ်လို အမျိုးအစား၊ ဒီကောင့်ဖွဲ့စည်းပုံက ဘယ်လိုလဲဆိုတာ အရင်သိအောင်လုပ်ရတာ ဗိုင်းယပ်စ်ဗေဒ ပညာရှင်တွေ အလုပ်ပါပဲ ။ ကိုဗစ် ၁၉ ရဲ့ Genetic Code က အဲဒီ ဗိုင်းယပ်စ်ရဲ့ တည်ဆောက်ပုံ Blue Print ပဲ ။ ကိုဗစ် နိုင်တင်း Covid-19 ကို အတိုကောက် Sars-CoV-2 လို့ မှတ်ပြီး အတိအကျ က Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus2ပါ။
ဒေါက်တာ ကိတ် ဘိုဒဲရစ် ဆီမှာ အရင် ဆားစ် နဲ့ ဇီကာ ကာကွယ်ဆေးတွေ ထုတ်ထားတဲ့ အတွေ့အကြုံ ရှိထားတော့ အခုလို တရုတ်ပညာရှင်တွေဆီက Genetic Code ရလိုက်တာနဲ့ ကာကွယ်ဆေး တည်ဆောက်ရမယ့် DNA ဒီဇိုင်းကို မြန်မြန်လုပ်လိုက်နိုင်တဲ့ သဘော ။သူက တရုတ်ပညာရှင်တွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အစမှာ သူ မှန်းထားတာ အမေရိကန် (FDA ) အဖွဲ့ ရဲ့ ထောက်ခံချက်ရရင် ( approval from the US Food and Agency Administration ) ဇွန်လထဲမှာလူ ကို စ စမ်းနိုင်မယ်လို့ပဲ ။ အခု ကျတော့ ရှေ့လ ဧပြီမှာ စစမ်းနိုင် မယ် ဆိုတော့ စောသွားတာပေါ့ ။ ဆားစ် တုန်းက သူတို့ ကာကွယ်ဆေးထုတ်နိုင်တဲ့ အဆင့်အထိ လ ၂၀ ကြာတယ်. ဇီကာ ဗိုင်းယပ်စ်ကာကွယ်ဆေး ( ၂၀၁၅ ) ကျတော့ Genetic Code ရပြီး ၇ လ ပဲ ကြာလိုက်တယ် ဆိုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ နိုင်ငံတချို့ ဆရာ ကြီးတချို့ ဆီ က ဒီ ဗိုင်းယပ်စ်ကိုတရုတ်က ထွင်လိုက်တာမျိုး ။ တရုတ် လက်ထဲမှာ ကာကွယ်ဆေးက ရှိပြီးသား ။ မကြာခင် ကာကွယ်ဆေးထုတ် ရောင်းစား- ထောပြီ ဆိုတာ မျိုး။ တချို့ကျတော့ ဒီပြဿနာဟာ မဟုတ် တရုတ် တွေ ဇီဝလက်နက် ထုတ်တဲ့ လျှို့ဝှက်ဓါတ်ခွဲခန်းက နေ မတော်တဆဖြစ်ဖြစ် နမော်နမဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ထွက်လာပြီးမှ မထိမ်းနိုင်မသိမ်းနိုင်ဖြစ်ကုန်လို့ အရပ်ကူပါ လူဝိုင်းပါ ဖြစ်တာလို့ ဒရာမာတွေခင်းကြပါတယ်။တကယ်လဲ တရုတ်ပြည်မှာလဲ မျက်ကလဲဆန်ပြာ ပါ ။
ခုအချိန်အထိတော့ အဲလို နိုင်ငံရေး လက်သီးပုန်း သီအိုရီ တွေ ထက် စာရင် အစားသရမ်းတဲ့ ဝူဟန်မြို့ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်အရောင်းစျေးတန်းကြီးက ဇာတ်လမ်းစတယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ထင်မိပါ တယ်။တရုတ် ဗိုင်းယပ်စ် ဗေဒပညာရှင် တွေ အခုအခါ သဲကြီးမဲကြီး ပြန်ခြေရာခံကောက်ကြတဲ့ အခါ ကိုရိုနာ ဗိုင်းယပ်စ် ပိုး ရဲ့ ဗီဇ ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အဲဒီ စျေးမှာရောင်းနေတဲ့ လင်းနို့တွေမှာ ရှိနေတဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းယပ်စ် နဲ့သွားတူနေတယ်။ နောက်တခါ ( လေ့လာနေတုန်း ) ပင်ဂိုလင်ဆိုတဲ့ အကောင်ဆီက ကိုရိုနာ ဗိုင်းယပ်စ်ပိုး နဲ့ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းသွားတူနေတာ ကို သူတို့ ရှာဖွေ တွေ့ရှိထားသတဲ့
A team of virologists at the Wuhan Institute for Virology releasedadetailed paper showing that the new coronaviruses' genetic makeup is 96 per cent identical to that ofacoronavirus found in bats, while an as-yet unpublished study argues that genetic sequences of coronavirus in pangolins are 99 per cent similar to the human virus.
ဒီကောင်တွေကို အစားသရမ်းတဲ့ မောင်တွေ မတွေ က ခုတ်ထစ်ကြ- ရောင်းချကြ - စားသောက်ကြရင်း ဗိုင်းယပ်စ်က လူဆီရောက် ။ဗီဇပြောင်း ( Mutation ) ( ဘုရားရိုက် ) အဲလို ကျွန်တော်က ထင်တယ်။
ကာကွယ်ဆေး ရလာပေမယ့် တကမ္ဘာလုံးအတွက် အကြီးအကျယ် နဲ့ လုံလောက်အောင် အလျင်အမြန်ထုတ်ဖို့ အတွက်တော့ မလွယ်လှပါ ။ အခု ဒေါက်တာ ကိတ် ဘိုဒဲရစ်တို့လို့ပဲ ဆေးကုမ္ပဏီ ကြီးတွေ Academic Institution ကြီးတွေ ၃၅ခုလောက်က အပြိင်အဆိုင် အပြင်းအထန် သူ့ထက်ငါဦး Covid-19 Vaccine ကာကွယ်ဆေးရဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ကိုဗစ် ဗိုင်းယပ်စ် ဟာ ၂၀၀၂-၂၀၀၄ မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆားစ်( SARS severe acute respiratory syndrome ) ။ ၂၀၁၂ ဆော်ဒီမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မားစ် ( MERS ) Middle East Respiratory Syndrome ) တို့နဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းယပ်စ် မျိုးစိတ်တွေချင်း အတူတူ ။ ဆားစ် ဗီဇ နဲ့ ဆိုရင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း တူတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ပုံတွေမှာ ပြထားတဲ့ ဗိုင်းယပ်စ်ရဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ ရှိတဲ့ ဒလက် ချွန်လေးတွေက လူ့ အဆုတ်ထဲက တစ်ရှူးမျက်နှာပြင်တွေကို ကုတ်တွယ်ပြီး အဆုတ် ဆဲလ်တွေထဲ ဝင်ရောက် အသွင်ယူ မျိုးပွါး ။ အဆိပ်တွေထည့် ဖျက်ဆီးကြတော့တာပါ ။ အဲလိုဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ လူ့ ခုခံရေးစနစ်Immune System က ခုခံတဲ့ antibodies တွေ ထွက်ပါတယ်။ အဲဒီ ခုခံတဲ့ ဓါတ်က ကာကွယ်ဆေး ထုတ်တာရဲ့ အခြေခံ ပါပဲ ။
အခု ကိတ်တို့ စမ်းသတ်နေကြတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေကို ပထမအဆင့် မှာ ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ လူ ဒါဇင် အနည်းငယ်လောက်နဲ့ စ စမ်းရ ပါတယ်။ သူတို့အားလုံးကို သီးသန့် အခန်းကိုယ်စီနဲ့ ထားပြီး ၂ပတ်လောက် ဘယ်မှ မသွားရပဲ တီထွင်ထားတဲ့ ဆေးကို ထိုးမယ်။ ပြီးရင် ခန္ဓာကိုယ်က တုန့်ပြန်မှုကို အမျိုမျိုး စမ်းသတ်ကြမယ်။ လန်ဒန်မြို့က သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာတခုမှာ စမ်းသတ်မှုတွေ စတင် နေတာကို တီဗွီက နေ ပြသွား တယ်။ ဗော်လံတီယာ အစမ်းသတ်ခံမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ကို ၂ပတ်အတွက် ပေါင် ၃၀၀၀ ပေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဘယ်မှာမသွားမလာရ အခန်းအောင်း ၂ပတ် ကို ပေါင်၃၀၀၀ ဆိုတော့ စမ်းပျော်ပါတယ်။ ကိုယ်လဲ အသက်ငယ်သေးရင် ၂ပတ် ပေါင် ၃၀၀၀ အလုပ်ကို အတော်စိတ်ဝင်တစားလျောက်မိမှာပါ ။
အဲလို ဒါဇင် အနည်းငယ်နဲ့ စ စမ်းသတ်လို့ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ဒုတိယဆင့်မှာ လူနာ အစစ် ရာဂဏန်းအတော်များများနဲ့ ဆက်စမ်းကြပါတယ်။ လူနာ ရာဂဏန်းအတော်များများနဲ့ အဆင်ပြေတယ်ဆိုမှ တခါ လူနာ ထောင်ဂဏန်းအတော်များများနဲ့ ဆက်လက်စမ်းသတ်ကြရတာပါ။ လူနာ ထောင်ဂဏန်း အတော်များများ နဲ့ စမ်းလို့ ထိရောက်နေပြီ။ ဆိုးကျိုးတွေလဲ မတွေ့ရပါဘူးဆိုတဲ့ အချက်တွေ ကို အတည်ပြုတဲ့ အမေရိကန် FDA လို အဖွဲ့မျိုးက ထောက်ခံပြီးပြီဆိုရင် တကမ္ဘာလုံးအတွက် ထုတ်လုပ်ရပါပြီ။
အမေရိကန်သမတထရမ့် က ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် နိုဝင်ဘာလထဲလောက် ကို ကာကွယ်ဆေးတွေ အဆင်သင့် ဖြစ်စေ ထုတ်စေချင် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ပညာရှင် Vaccinologists တွေ အတော်များများကတော့ ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ တကယ် အကြီးအကျယ်ထုတ်ဘို့ ဆိုရင် နည်းပညာ အဆင့်မြင့်မြင့် နဲ့ ဧရာမ ထုတ်လုပ်ရေး ဆေးဝါးစက်ရုံကြီး လိုမယ်။ ဘီလီယံ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀၀ လောက်အထိ ရင်းနှီးရမယ်လို့ ပြောပါတယ်. အဲဒီမှာ နိုင်ငံရေးကိစ္စနဲ့ အစိုးရ များကိစ္စတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ တကမ္ဘာလုံးက လူသားတွေကို Mass immunization အားလုံးကာကွယ်ဆေး အဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်အောင် ရံပုံငွေ ဖန်တီး မတည်နိုင်ကြပါ့မလား။ မရရင် တနိုင်တပိုင်လောက် ပဲ တတ်နိုင်တဲ့ အစိုးရတွေက ထုတ်နေကြမှာလား။
H1N1 တုတ်ကွေးတုန်းက ဆို ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေအတွက်လောက်ပဲ ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြတာမျိုးတဲ့
လောလောဆယ်တော့ အင်္ဂလန်က ပေါင် သန်း ၂၀ သုံးပြီး ဓါတ်ခွဲခန်း ၁၃ နေရာမှာ ခွဲပြီး ကာကွယ်ဆေးရအောင် စမ်းသတ် ကြိုးစားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဓိက က ကာကွယ်ဆေးရလာရင်ကုသရေးမှာ ရှေ့တန်းက ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ ဆေးပညာရှင်တွေ ဆေးဝန်ထမ်းတွေ ဆရာဝန်ဆရာမတွေ နောက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်တဲ့ လုပ်သားတွေ လူအိုရုံက လူအိုတွေ အဲသလို အဆင့်ဆင့် ဦးစားပေး စဥ်းစား ဆောင်ရွက် ထိုးနှံသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်
အသဲရောင် အသားဝါ ဘီပိုး စီပိုးကာကွယ်ဆေးကို လူတိုင်းအတွက် အလကား မထိုးပေးနိုင်သလိုပေါ့။
လောလောဆယ်တော့ ကာကွယ်ဆေးထုတ်နေတဲ့ ဆေးပညာရှင်တွေကိုမေတ္တာပို့ကြပါ ။ သူတို့ အလွယ်တကူ အိမ်ပြန်ပြီး အိမ်သားတွေနဲ့လွယ်လွယ်တွေ့လို့ မရတဲ့ အလုံပိတ်အ ခန်းတွေထဲမှာ ကာကွယ်ဆေး ပေါ်ဖို့ အပြင်းအထန်အလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီးက ဆေးပညာရှင်တွေကို ရှေ့ဆုံးက ထား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောသွားတာပါ ။
ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရတာ လူသား ၄သိန်း နီးပါး ရှိလာပါပြီ
ကျွန်တော်တို့က အသက်ကို ဉာဏ်နဲ့ စောင့်ရှောက်ကြမယ်။ နမော်နမဲ့ ဆိုရင် သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ ရွတ်နေရမယ်။ သုံးရာသီ လုံး ခေတ်မီ ဆောင်ပုဒ်က တော့
လက်ဆေးခြင်း မှာ- မပျင်းရာ ။
ခွန်ဆိုင်း ( ၂၄.၀၃ -၂၀၂၀ )
ခွန်ဆိုုုုုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ - ၈ Reviewed by MoeMaKa on 12:00 PM Rating: 5